बिहे गर्न केही झुट थिए तर यो दुनियाँ चकित हुने झुट जब बिबाह सकिनै लाग्दा खुल्यो ! – Online Saptarangi
October 21, 2020 October 21, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on बिहे गर्न केही झुट थिए तर यो दुनियाँ चकित हुने झुट जब बिबाह सकिनै लाग्दा खुल्यो !
सामान्यतयाः हामीले सुन्ने गरेका छौं कि मान्छेहरु विहे गर्नका लागि झुट बोल्छन् । तर कतिसम्म झुट बोल्छन् त्यसका बारेमा आज हामी तपाँईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
विवाहको मण्डपमा एउटी महिलाले अचानक पुगेर दुलहालाई आफ्नो पति भनेपछि हंगामा भएको हो । विवाह गरिरहेका युवकले आफ्नी पहिलो श्रीमतीलाई उनी कार्यालयको कामको लागि शहर बाहिर गएको बताएका रहेछन् । घरबाट बजार जान्छु भनेर निस्केका उनी अर्की महिलासँग विवाह गर्न गएको खुल्न आएको हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
समाचार अनुसार दोस्रो पटक विवाह गर्न लागेकी दुलहीलाई ति पुरुष विवाह भइसकेको व्यक्ति भनेर थाहा थियो । तैपनि उनले विवाह गर्ने निर्णय गरिन् । घरमा पहिलो श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गर्दा जाम्बियामा ७ बर्ष सम्म जेल सजाय हुनसक्छ
December 5, 2019 September 26, 2020 admin
हार्दिक बधाई ! सुनसरीका प्रहरी निरीक्षक सरोज खनाल उ’त्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता
October 17, 2020 Prakash Waiba